Insizakalo yokusika ishidi le-3K ye-matte carbon fiber sheet China Manufacturer
Incazelo:Ukusikwa Kwekhabhoni Ye-3k,Masenze Plate Matte,Ukusika i-3k Carbon
Home > Imikhiqizo > Ukuzisika kwe-Carbon Fibre > Insizakalo yokusika ishidi le-3K ye-matte carbon fiber sheet
Insizakalo yokusika ishidi le-3K ye-matte carbon fiber sheet
I-Model No.: HCF038
Leli Khasi le-Fibbon le-Carbon egcwele , futhi ama- CNC asika i-carbon fiber sheet ozimele adume kakhulu phakathi kwezinto zokwenziwa zekhabhoni. 0/90 degrees no-0/45 / -45 / 90 degrees (quasi-isotropic) izakhiwo ziyatholakala.
Ngenxa yesisindo sayo sokukhanya, ibhodi ye-carbon fiber yokusika i-CNC idume kakhulu ezimakethe ze-UAV, UVA neFPV. Manje isisetshenziswa kabanzi futhi kabanzi.
Ishidi le-Fibbon ye-Carbon egcwele, Ishidi le-Carbon Glass Sheet, i-G10 Glass Fiber Sheet yonke esitokweni.
Noma yimiphi imibuzo yokusika kwe- CNC noma i-OEM service pls zizwa ikhululekile ukuxhumana nathi.
Usayizi: 400x500 / 500x600mm (singanikeza ukusikwa kwe-cnc)
CNC Sika i-Carbon Fiber Board / ishidi / ipuleti Xhumana Nanje
Insizakalo yokusika ishidi le-3K ye-matte carbon fiber sheet Xhumana Nanje
I-3K Real carbon fiber cnc yokusika ipuleti Xhumana Nanje
ipuleti le-carbon cnc eligcwele yokusika i-RC Xhumana Nanje
Ukusika kwe-3K UD Prepreg Carbon Fiber Sheet Xhumana Nanje
Izingxenye ze-CNC ezisika izingxenye ze-3K carbon fiber sheet Xhumana Nanje
ukusikwa kwe-carbon fiber sheet ukusika indiza ye-RC Xhumana Nanje
CNC 3k twill matte carbon fiber sheet ukusika sheet Xhumana Nanje
Ukusikwa Kwekhabhoni Ye-3k Masenze Plate Matte Ukusika i-3k Carbon Ukuzisika Kwekhabhoni ye-DIY Ukusikwa Kweshidi Lekhabhoni Ukufakwa Kwekhampasi Ye-Tube Ukusika kweCarbon Tubes Ukusikwa Kwe-Carbon Fibre Egcwele